Wakiilka Somaliland ee Kenya Amb. Baashe oo beeniyay warar ay faafisay DFS - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Wakiilka Somaliland ee Kenya Amb. Baashe oo beeniyay warar ay faafisay DFS
Wakiilka Somaliland ee Kenya Amb. Baashe oo beeniyay warar ay faafisay DFS
Wakiilka Somaliland ee Kenya Amb. Baashe Cawil ayaa ka hadlay warar been buur ah oo ay faafisay DFS kaas oo lagu sheegay in isaga lagu xiray magalaada Nairobi ee dalka Kenya. Safiirka Baashe ayaa beeniyay in la xiray, waxaanu sheegay in warkaasi been abuurka ah ay ka dambayso dawlada Farmaajo, isagoo sheegay in dadka Soomaalidu isaga sharaf ka mudanyihiin, qoraalka wakiilka oo dhamaystirana waxa uu uqornaa sidan:-
WAR CELINTA WAR BEEN ABUURID AH
Reer Soomaaliya ma habaar bey dan moodeen!
Aniga layma xidhin, waxaan muddo labo bilood ahna aan joogay Dalka Imaaraadka Carabta, oo ay iigu dhacay xayiraadii COVID 19 si lama filaan ah.
Waxaan ahay Wakiil matala Sharafta iyo Karaamada Shacab iyo dawladd ee Jamhuuriyadda Somaliland, Dawlada Kenya iyo Somaliland na waxa ay leeyihiin cilaaqaad soo jireena, oo oo ilaa 18th century gii soo jiray, maantana maraya heerkiisii ugu sareeyay.
Previous articlePuntland oo goaan culus kasoo saartay Maalmaha Ciida
Next articleGudoomiye Najax oo digreeto kasoo saaray dhul boobka kasocda Sh. Hoose